Ahitana sehatra telo : Hiarahan’ny fihaonana sy ny zava-baovao ny fetin’ny Mozika
Toa ny isan-taona, dia ankalazaina ny 21 jona ny fetin’ny mozika. Noho io andro io, izay andro fiasana anefa dia naroson’ny Alliance Française Andavamamba (Aft) ny 16 jona izao ny fankalazana ny fetin’ny mozika izay …Tohiny
Tarika Mahaleo : Tsy afa-niatrika ny fampisehoana i Fafah
Anisan’ireo hetsika nisongadina ny faran’ny herinandro teo ny « Revy Gloum », niarahana tamin’ny tarika Mahaleo sy ny tarika Ikalavazo tetsy amin’ny tokotaniben’ny Esca tetsy Antanimena. Ho an’ny tarika Mahaleo, dia tsy afa-niatrika io fampisehoana …Tohiny
RNM sy TVM faritra Anosy : Nahazo fampitaovana avy amin’ny fitondram-panjakana
Nitohy tany amin’ny faritra Anosy ny fanatanterahana ny tetikasa fanomezana fitaovan-tserasera ary fomba hanatsarana ny kalitaon’ny haino aman-jerim-panjakana, manerana ny faritra 22 avy amin’ny minisiteran’ny Serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana. Faritra maro raha ny …Tohiny
Vola mitentina 140 Tapitrisa Ariary isam-bolana no ilain’ny kaomina Toliara entina hampandehanana ny raharaha. Vola mitentina 60 tapitrisa Ariary isam-bolana ihany anefa no miditra amin’ny kitapom-bolan’ny kaomina anatin’ny iray volana. Izany hoe, banga eo amin’ny …Tohiny